မိတ္တူကူးဖိုင် (SDF) ကိုရှာပါ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » မိတ္တူကူးဖိုင် (SDF) ကိုရှာပါ
Duplicate File (SDF) APK ကိုရှာပါ
မိတ္တူကူးခြင်း / dupe / cache / obsolete ဖိုင်များသည်သိမ်းဆည်းခြင်းနေရာအတော်များများရှိပြီးဖိုင်ရှာဖွေမှုအမြန်နှုန်းကိုနှေးကွေးစေပြီးသင့်အားတေးဂီတ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာကိုဒေါင်းလုပ်မပြုလုပ်ရန်တားဆီးသည်။ ၎င်းကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုခွဲခြားရန်ခက်ခဲသည်။
Search Smart Duplicate File တစ်ခုဖြစ်သော Android Smart Utility အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ ဤမိတ္တူပွား / dupe / cache / obsolete ဖိုင်များကိုအလွယ်တကူတိကျစွာရှာဖွေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ Android ကိရိယာတွင်သိုလှောင်မှုနေရာလွတ်များစွာပေးသည်။
ပထမ ဦး ဆုံး Android (သာ Android) app သည်ပုံတူဖိုင်များကိုရှာဖွေလေ့ရှိသည်၊ 2011 သည်အမြန်ဆုံးနှင့်အစွမ်းထက်ဆုံးပုံတူပွား / cache / obsolete files များကို remover လုပ်ပြီးကတည်းက!
အဆင့်မြှင့်ထားပါနှင့်ပို။ ပို။ အစွမ်းထက်!
အရေးကြီးချက် - ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကဒီ app ကိုဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်မှတ်သားသည်၊ မှားသည်မှန်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဤဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲလ်များကိုစစ်ဆေးပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ bug အတွက်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး application ပိုင်ရှင်ထံအီးမေးလ်ပို့လိုက်ပြီ။
>>> ထူးခြားချက်များ (2011 မှစ၍):
Sub-folder ကို support, မည်သည့် directory ကိုရွေးချယ်ပါ။
Supporting Lock Folder၊ အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကိုကာကွယ်ပါ (Paid version only)
SD ကဒ်နှင့် OTG usb သိုလှောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပါ (Android 7.0 မှ၊ Google သည် OTG ကိုပိတ်ထားသည်၊ သို့သော်အချို့ကိရိယာများသည်၎င်းကိုသင်၏ကိရိယာထုတ်လုပ်သူများပေါ်တွင်မူတည်သည်) ။
Mount point points / TRUE ပုံတူများကိုရှာဖွေပါ။
Smart-selector ကိုထောက်ပံ့ပါ၊ မူရင်းနှင့်မိတ္တူများကိုတိကျစွာခွဲခြားပါ။
ကာတွန်းရုပ်ပုံများကို APNG / GIF (Pause / Resume) ကိုထောက်ပံ့ပါ။
ဖိုင်အမျိုးအစား / ဖိုင် extension သို့မဟုတ်ဖိုင်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပါ။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များ (ပုံ၊ အသံ၊ ဗီဒီယို၊ စာရွက်စာတမ်း၊ အက်ပ်၊ သော့ချက်စာလုံးများ regex wildcard၊ ရွေးချယ်မှုများ) ကိုစစ်ထုတ်ပါ။
SHA / CRC32 / MD5 ဖိုင်များကိုဖန်တီးပါ။
"Flagged folders" မှတစ်ဆင့် cache / temp / မလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဖျက်ပစ်ပါ။
အလားတူရုပ်ပုံများ / အက်ပ် / ဖိုင်အမည်များကိုရှာပါ။
ပုံရိပ် / အသံ / ဗီဒီယို / အက်ပ် (မီဒီယာယာယီသိမ်းဆည်းခြင်း / သမ်းနေးလ်) ကိုရှာဖွေပါ။
Super search (ဖိုင်အမည်၊ အမျိုးအစား၊ အရွယ်အစား၊ အချိန်၊ ခေါင်းစဉ် / နောက်တွဲတွဲ)
hash code ဖိုင်များကိုရှာပါ။
ဗွီဒီယိုကို resolution နှင့်ကြာချိန်အလိုက်ရှာဖွေပါ။
ပုံများအား resolution ဖြင့်ရှာဖွေပါ။
ရှာဖွေပြီးသက်ဝင်လှုပ်ရှားသည့် GIF / PNG / APNG / WEBP ။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အပေါ် အခြေခံ၍ စွမ်းဆောင်ချက်များပိုများလာသည်။
●သံခားသင်္ကေတများကို "*" ကိုထောက်ပံ့ပါ။
●ဘာသာပြန်ကိုပြသရန် menu / item ကိုနှိပ်ပြီး (Google / Microsoft ဘာသာပြန်အက်ပလီကေးရှင်းလိုအပ်သည်)
●ပြောင်းတဲ့ဘာသာစကားကိုထောက်ပံ့ပါ။ သင့်ဘာသာပြန်ကိုတကယ်တန်ဖိုးထားပါတယ်။ needjava1980@gmail.com ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
● Batch select လုပ်ခြင်း၊ deselect လုပ်ခြင်း၊ ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ ပြိုလဲခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ ဖိုင်များသို့မဟုတ်အုပ်စုများကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ရှာဖွေမှုရလဒ်ကို /sdcard/duplicates.txt ဖိုင်တွင်သိမ်းပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖိုင်ကိုအရင်အရင်ဖန်တီးပါ။
●အသေးစိတ်မြင်ကွင်းတွင်ဖိုင်နာမည်၊ Filepath သို့မဟုတ် MD5 ကိုရှည်စွာအသာပုတ်။ ၊ system clipboard သို့ကူးယူပါ။
>>> လူသိများသောပြuesနာများ -
●ဖိုင်အမြောက်အများကိုရှာဖွေခြင်းသည် crash ဖြစ်စေနိုင်သည် - OutOfMemoryError၊ ဤပျက်ကျမှုမှရှောင်ရှားရန်၊ ချိန်ညှိချက်များ - အထွေထွေရှိဖိုင်အရွယ်အစားကို ကျေးဇူးပြု၍ သတ်မှတ်ပါ။
●ဂူဂဲလ်ပေါ်လစီကြောင့် Android 4.4 Kitkat ပြင်ပ SD ကဒ်တွင်ဖိုင်များကို ဖျက်၍ မရပါ။
# ပြခန်း | မီဒီယာဖွင့်စက်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ရှိမီဒီယာဖိုင်များသို့မဟုတ်အားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်
1 ။ လျှို့ဝှက်ဖိုင် /sdcard/.nomedia ကိုဖျက်ပါ။
2 ။ မီဒီယာသိုလှောင်မှုအချက်အလက်ကိုရှင်းပါ။ ချိန်ညှိချက်များ - အက်ပ်များ - အားလုံး - မီဒီယာသိုလှောင်မှု - ဒေတာကိုရှင်းလင်းပါ။
3 ။ သင်၏စက်ကို reboot လုပ်၍ ခဏစောင့်ပါ။
>>> အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် -
عمارسالم (amar0876) (အာရဗီ)
Fatih Fırıncı (တူရကီ)
တူရကီ (Fatih Fırıncı)
02 / 16 / 2014
မိတ္တူကူးဖိုင် (SDF) ကိုရှာပါ
2.67 ကို MB
ဖိုင်မှတ်တမ်းကို Duplicate ...
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager က ...